Okraina : Ny Fomba Handaminana Ny Olan’ny Mpitsoa-Ponenana Mankany Eoropa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2016 3:46 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français, Español, русский, English
“Heloka bevava ny mandray mpitsoa-ponenana avy any amin'ny firenena hafa raha mbola miady sy mitolona amin'ny krizy ara-toekarena ny firenenao. Tsy maintsy mikarakara ireo mpifindra monina avy any Donbas isika “, hoy i Andriy Illienko, solombavambahoaka avy amin'ny antoko nasionalista ‘Svoboda’, tamin'ny fakàna ohatra ny ady mitàm-piadiana izay efa niainana tany Donbas nandritra ny roa taona izay.
“ Ity resaka ity (mpitsoa-ponenana Syriana mitady fialokalofana ao Okraina – GV) no ho fandaharam-potoanantsika ato ho ato. Rehefa tonga mpikambana ao amin'ny Firaisambe Eoropeana i Okraina, dia tsy maintsy maneho firaisankina amin'ny resaka fandraisana mpitsoa-ponenana raha ilaina, hoy ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Okrainiana, Pavlo Klimkin, tao amin'ny ‘canal 5′-n'ny fahitalavitra okrainiana.
“Tsy hiaina ny firohotry ny mpitsoa-ponenana avy any Syria i Okraina. Fantatry ry zareo tsara fa miaraka amin'ny olana misy ao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia mbola tsy vonona i Okraina. Izany no antony ahitan'ireo mpitsoa-ponenana ny taninay ho toy ny faritra lalovana amin'ny làlany mankany Eoropa Andrefana,” hoy i Maksym Yakovlev, mpampianatra siansa politika ao amin'ny akademia Kyiv-Mohyla any Okraina
Tamin'izay fotoana izay, no nilazan'ireo Okrainiana sangany amin'ny politika fa misy mpitsoa-ponenana maro be avy any amin'ireo ao fanjakana Afovoany Atsinanana toa an'i Syria lazaina fa efa eny “an-dàlana ho any Okraina”. Fotoana ahafahana mangata-bola sy tombony ara-barotra amin'i Alemaina ny fahitan'izy ireo ny olan'ny mpitsoa-ponenana, satria ny Chancelière Alemà Angela Merkel mihitsy no nampanantena izany ho an'izay vonona hanampy amin'ny firohotry ny vahoaka mandositra ady, hanoanana sy fahantràna.
“Hiezaka ny Firaisambe Eoropeana hanatsara ny fepetram-piondranana ho an'ireo firenena mibaby ny vesatry ny fifindràmonina noho ny krizy any Syria. Ary mety hisy tombony ara-barotra amin'izany, ” hoy i Merkel.
Nolazain'ny Minisitry ny raharaham-bahiny, Klimkin, fa na dia tsy mbola nanapa-kevitra ny ho avy maro be aza ny mpitsoa-ponenana amin'izao fotoana izao, dia tsy maintsy manaiky azy ireny sy manome azy izay singa fototra rehetra ilainy i Okraina mba hanehoana ny firaisankina amin'ireo Eoropeana Tandrefana mpiara-miasa.
Nandritra ny fitsidihana farany indrindra nataon'ny mpiasan'ny Firenena Mikambana sy ny solontenan'ny Sampan-draharaham-pirenena misahana ny fifindràmonina tany Yahotyn mba hamaliana ny fanontanian'ny olona ao an-toerana, dia nanao fihetsiketsehana ireo mpikambana avy ao amin'ny hery faran'ny havanana. Raha mbola niresaka tamin'ireo vondrom-piarahamonina, tao anatin'ny Tranon'ny Kolontsainan'ny tanàna ireo manampahefana, ireo Okrainiana mpikatroka ao amin'ny vondron'ny mpiasa an-tsitrapo ” Rantsan'ny Havanana” sy ny vondron'olon-tsotra “Azov” kosa nanangona ny mpanohana azy tao ivelany. Nantsointsoin-dry zareo ny teny faneva toy ny hoe ” TSIA hoy izahay amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana ao Yahotyn ” sady nolazainy tamin'ny mponina fa fara-fahakeliny 200 ireo mpitsoa-ponenana avy any Syria tokony ho tonga ao an-tanànany amin'ny volana May. Nampangain'ireo mpikatroka ao amin'ny hery farany havanana ho ” mitondra karazana valanaretina tsy fantatra”, ireo mpitsoa-ponenana, “isan'izany ny viriosin'ny Zika” ary noheveriny koa fa hidangana be ny tahan'ny heloka bevava ao an-toerana, tamin'ny nilazany fa mety hisy ny fanafihana fampihorohorona sy ny fifandonana ara-pivavahana noho ireo fahatongavana vaovao ireo. Samy tsy misy porofo mazava na ny isan'ny mpitsoa-ponenana (200 fa tsy 110 araka ny filazàna ôfisialy) na ny fampitandremana, fa mikendry ny hampiorina tahotra sy fifampiahiahiana eo amin'ny samy mponina ao an-toerana no kendreny.
Zara raha nanao ezaka ny haino aman-jery Okrainiana, amin'ny fitrandrahana ny vaovao farany sy ny antsipiriham-baovao manindrotsindrona mba hampahafantatra sy hanazava ny andraikitr'i Okraina amin'ny olan'ny mpitsoa-ponenana Eoropeana. Araka ny fanadihadiana nataon'ny haban-tranonkala mpanara-maso ny haino ama-jery Detector.Media, tsy misy na iray aza amin'ireo fahitalavitra malaza ao an-toerana nandrakotra amin'ny fomba marina sy mahitsy ny tantaran'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana. Tsy misy milaza ny ankamaroan'izy ireo fa vola avy tamin'ny Firaisambe Eoropeana no nanamboarana ilay toby. Ireo mpanao gazety sasany aza moa dia sahy mandiso sy lahateny fankahalana am-pahibemaso, milaza ireo mpifindra monina ireo ho “olona tsy azo antoka” sy ” mpirenireny izay atahoran'ny ao an-toerana satria olondia sy hanimba zavatra maro”. Hitan'ilay fanadihadiana ihany koa fa saika ampitahain'ireo tantara hafa rehetra ireo mpitsoa-ponenana Syriana sy ireo mpifindra monina avy any Atsinanan'i Okraina.